Ithegi: Uhlalutyo | Martech Zone
NgoMvulo, Oktobha 6, 2014 NgeCawa, Oktobha 5, 2014 Douglas Karr
Sinike inkcazo ye-analytics kunye nokudwelisa lonke uhlalutyo lwe-Intanethi onokulufumana ukukunceda ukulinganisa ifuthe lesicwangciso sakho sentengiso. Njengoko ubona ngamanye manani angezantsi, nangona kunjalo, abathengisi bayaqhubeka nokusokola kukhetho lwabo lwe-analytics kunye neziphumo. Ndiyakholelwa ukuba eyona nto iphambili koku kukuba i-analytics ihlala ibonelela ngetoni yolwazi, ngaphandle kokubonelela ngezisombululo. Njengoko
NgoLwesine, Agasti 28, 2014 NgoLwesihlanu, ngoJuni 19, 2015 Douglas Karr
Wuthanda ngokungagungqiyo umyalezo apha ovela kumthengisi weprimiyamu wase Mzantsi Afrika woolworths. Umhleli wedijithali uSam Wilson uxoxa ngendlela iimveliso zeNtlalontle, iAnalytics kunye noMakhi, ezenza ukuba iqela lakhe liqhube ukubandakanyeka kwegama kunye nokuhambisa ulwazi olunamandla lwentlalo kubaphathi beenkampani. Icebo likaWoolworth lingaphaya kokumamela nje nokuphendula ngemidiya yoluntu. Kukho ezinye izinto ezi-4 ezikhankanywe nguSam ezibancedileyo ukuba baphumelele, ngaphandle nangobunkokeli babo bangaphakathi. Uhlalutyo-ukufikelela kwisilayidi kunye needayisi
NgoMvulo, nge-5 kaDisemba ngo-2011 NgeCawa, uDisemba 4, 2011 Douglas Karr
Le infographic ibizwa ngokuba sisikhokelo esibonisiweyo kwi-SEO Automation, kodwa ayisiyiyo into ezenzekelayo, imalunga nenkqubo efunekayo yokuphucula iziphumo zentengiso yeinjini yokukhangela ngesicwangciso esiqhubekayo. Iinkalo zenkqubo zinokuzenzekelayo… kodwa ukuba wenza izinto njengokuthenga nokwenza i-backlinks ngokuzenzekelayo, inkampani yakho isiya engxakini. Ukulungiswa kweinjini yokukhangela ubukhulu becala yinkqubo yesikhokelo efuna ukuba wenze uphando oluninzi, wenze umxholo wakho ube ngcono,